शनिबार ३०, असोज २०७८ १९:४७
यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल पास गरेको एक साताभित्रै सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) दिन सक्ने बताएको छ ।
किन भनिन्छ शिलाजीतलाई जडीबुटीको राजा..?
आइतबार, २१ भदौ २०७७ धनगढी खबर
विभन्न अग्ला पहाड तथा पहराहरूमा पाइने जडीबुटी शिलाजीतका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । आयुर्वेदमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ । यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ ।
८ हप्ताको शिशुले आफ्नो पितालाई हेलो भनेपछी...!
बिहिबार, १८ भदौ २०७७ एजेन्सी
त्यो इच्छाशक्ति: बेपत्ता भनिएका युवक जव सय किमी हिँडेर विश्वकै लामो पुल हेर्न पुगे...!
बिहिबार, ११ भदौ २०७७ रासस
मानिसको सोच, इच्छा पनि अनेक हुन्छ । र, त्यो इच्छाशक्ति दृढ भए जर्बजस्त पनि पुरा गर्ने चाह हुन्छ । त्यही हुटहुटीमा थिए निसीखोला गाउँपालिका–३ धाराखर्कका तीन किशोरी र एक किशोर ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गृहमन्त्री थापा, आपूर्ति मन्त्री भट्ट, सहितको टोलीद्धारा स्थलगत अनुगमन
अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूका लागि राहत सामग्री उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहितको टोली घटना स्थल पुगेको छ ।
बुधबार, ०१ असोज २०७६ सुरेश पन्त
कहानीमा मोड तब आयो जब २०६३ साल चैत्रमा लिसा कम्पनिको जागीरबाट बिदा भए अब के गर्ने बारेमा सोच्दै गर्दा मोत्तानको मनमा अध्ययनले ठोक्कायो ।
बुधबार, ०४ भदौ २०७६ धनगढी खबर
सुदूर पश्चिमेलीहरुको मुख्य चाड गौरा सुरु भएसँगै गाउँघरमा रौनकता छाएको छ।
बिहिबार, २३ साउन २०७६ एजेन्सी
अमेरिकाको नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा) ले आफ्नो अत्याधुनिक दुरबिनको प्रयोग गरेर पृथ्वीबाहेका अन्य ग्रहहरुमा एलियनको खोजी गरिरहेको छ ।
मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६ धनगढी खबर
डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ५० वर्षसम्म बिहे नगरी एकल जीवन बिताइरहेका नगर भित्रका महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भएको छ।
बुधबार, ०४ असार २०७६ धनगढी खबर
मनसुन सुरु हुने संकेत देखिन थालेकाले अब बिस्तारै तापक्रम घट्दै जाने मौसमविदहरुले बताएका छन् ।
सोमबार, ०२ असार २०७६ धनगढी खबर
बझाङ सदरमुकाम चैनपुरनजिकै रहेको डुङ्रीबाट मष्टा गाँउपालिका जाँदै गरेको स. १ ज १०७२ नम्बरको जीप डौठी भन्ने ठाँउमा दुर्घटना भएको छ ।
आइतबार, ०१ असार २०७६ धनगढी खबर
थरूहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिले आगामी भदौबाट थरूहट प्रदेशको मागसहितका विभिन्न १३ माग अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
भिरबाट लडेर बाजुरामा किशोरीको मृत्यु
शनिबार साँझ घाँस काट्ने क्रममा भिरबाट लडेर १७ वर्षीया किशोरीको मृत्यु भएको छ ।
शिक्षणसँगै आलु खेतीमा रमाएका प्रकाश सर
मङ्गलबार, २१ जेठ २०७६ धनगढी खबर
देशमा रोजगारी पाइएन भनेर आजभोलि धेरै युवा विदेशतिर उड्छन्।
बिहिबार, १६ जेठ २०७६ धनगढी खबर
बझाङ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह कर्मचारीविहीन भएका छन् ।
बिहिबार, ०९ जेठ २०७६ धनगढी खबर
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सत्ती भन्सार कार्यालयले लिलामी गर्न भनी जारी सूचनामा उल्लेखित ३ वटा मोटरसाइकल गायब भएको पाइएको छ ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले रक्सी खाएर नेपाली प्रहरी कुटे
शुक्रबार, २७ बैशाख २०७६ धनगढी खबर
रौतहटमा ३ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी पक्राउ परेका छन् ।
आमा बाबाले जन्माएर फाल्दिए । यस्तो जीवनबाट हार खाँदै मर्न लागेका दिर्घलाई पोखरा गएर शिशिर भण्डारीले बचाए !
बुधबार, ०४ बैशाख २०७६ धनगढी खबर
माग्न त दुवैले माग्ने नै हो, फरक यति मात्र हो कि, गरिबले मन्दिर बाहिर बसेर माग्छन्, अनि धनीले मन्दिर भित्र पसेर माग्छन् ।
सोमबार, २५ चैत २०७५ धनगढी खबर
मनले चाहेजस्तो वा कल्पना गरेजस्तो सधैं प्रेममा सफलता मिल्छ नै भन्ने छैन ।
युवा अवस्थामा सम्बन्धहरु कसरि जोगाउने ?
युवा अवस्थामा बनेका सम्बन्धहरु लामो समयसम्म टिक्न सके जिवनभरका लागि राम्रो साथी पाईने निश्चित हुने गर्दछ ।
मंगलबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ स्थिर
मंगलबार अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ स्थिर छ । सोमबारकै मूल्यमा घटबढ भएको छैन ।
अफगानिस्तानमा बाढी, कम्तीमा ३२ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तानमा बाढीका कारण कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गएको छ ।
शुक्रबार, २४ फागुन २०७५ रासस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १०९औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।